चिसोबाट बच्ने पाँच ‘टिप्स’ :: Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Audio, Video, Nepali Model, Actor, Actores, Interview
चिसोबाट बच्ने पाँच ‘टिप्स’आँखा र नाक ढाके राम्रो, मापसेको तातो एकछिनमात्र १० पुस, काठमाडौं । चिसोले देशभरको जनजीवन कष्टकर बनाएको छ । तराईका कतिपय ठाउँमा चिसोकै कारण मान्छेको मृत्यु भएको खबर पनि सार्वजनिक भैरहेका छन् । बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण बिहान-बेलुका घर बाहिर निस्कन समस्या छ । चिसोले बालबालिका र बृद्धबृद्धालाई बढी सताएको छ । अरुलाई पनि चिसोले उत्तिकै दुःख दिएको छ । योबेला रुघाखोकी नलाग्ने मान्छे निकै कम छन् ।
चिसोमा ध्यान नदिँदा स्वास्थ्य समस्या हुने भएकाले धेरै कुरामा विचार पुर्याउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा बृद्धबृद्धालाई यो बेला बढी ध्यान दिनुपर्छ । अरुले पनि उत्तिकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कसरी जोगिने त चिसोबाट ? चिकित्सक डा. वासुदेव पाण्डेको सल्लाह यस्तो छ ः
जाडोमा घाममा बस्ने तथा आगो या हिटर ताप्ने भएकाले शरीरभित्र पानीको मात्रा कम हुन जान्छ । त्यसकारण चिसोमा पानी लगायतका झोलिलो कुरा बढी सेवन गर्नुपर्छ । तर चिसो होइन, तातोमा जोड दिनुपर्छ । पानी पनि तताएर पिउनुपर्छ । खानेकुरा पनि तातो नै खानुपर्छ । तातो झोल र प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानु स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ ।
योबेला चुरोट, बिडी, चिया कफी र मदिरा बढी सेवन गर्ने चलन छ । जुन स्वास्थ्यका लागि राम्रो होइन । यसले क्षणिक रुपमा तातो भएको जस्तो लागे पनि त्यस्तो हुँदैन । स्वास्थ्यलाई नकारात्मक असर गर्छ । चिया र कफीको मात्रा कम हुनु राम्रो हुन्छ । जाँडरक्सी र चुरोटबिडी त सेवन नै गर्न हुँदैन ।
आगो र हिटरको प्रयोग कमः
जाडोमा आगो ताप्नु राम्रो भए पनि हिटरले नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । झ्यालढोका थुनेर हिटर बाल्न हुँदैन । एकछिन कोठा तताएर निभाउनुपर्छ । नत्र कार्बन मोनोअक्साईड ग्यासले श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग निम्त्याउनुका साथै मान्छेको ज्यानै जाने सम्भावना समेत हुन्छ । आगो पनि धेरै ताप्न हुँदैन । घाम ताप्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।
चिसो र तातोको सन्तुलनः
चिसोबाट एकैपटक धेरै तातो पार्दा शरीरलाई बेफाइदा हुन्छ । त्यसैले धेरै चिसो भएको छ भने एकैपटक आगोको छेउमा जान हुँदैन । शरीरलाई बिस्तारै तातो बनाउनुपर्छ । तातोपानीले नुहाउनु राम्रो भए पनि पानीलाई शरीरले सहनसक्ने मात्र बनाउँदा राम्रो हुन्छ । अर्थात मन तातोभन्दा पनि कम तातो भएको पानी उपयुक्त हुन्छ ।
रुघाखोकीलाई औषधि हैनः
सामान्य रुघाखोकीका लागि औषधिभन्दा घरेलु उपचार नै राम्रो हुन्छ । तातोपानी, पानीको बाफ र झोल खानेकुराले रुघाखोकी निको पार्छ । रुघाखोकी लाग्दा सकभर बाहिर ननिस्कँदा राम्रो । निस्कनै परे रुमालले नाकमुख छोप्नुपर्छ । स्वस्थ मान्छेले रुघाखोकी लागेको मान्छेबाट टाढा बस्नुपर्छ । ज्वरो नै आयो भने स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गर्न जानुपर्छ । रुघाखोकीका लागि मात्रै चाहिँ घरेलु उपचार नै उपयुक्त हुन्छ । तर, एकहप्ताभन्दा बढीरुघाखोकी लागिरहृयो भनेचाहिँ जाँच गराउन जानुपर्छ ।
5 Comments on “चिसोबाट बच्ने पाँच ‘टिप्स’”
Tejnarayan Aryal wrote on 26 December, 2012, 9:21
Yo ati ramro kura ho yo hami sabaile palana garnu par6 arko kura chahi malai yelarji vayeko6rugha lai rahan6 tesko lagi k garnu parla please hajurle tyo pani batauna saknu hun6 ki vanne aasha gareko 6u
shanti neupane wrote on 26 December, 2012, 9:57
Bijay yadav lahan sirha wrote on 26 December, 2012, 13:25
राजीव तामांग wrote on 27 December, 2012, 17:27
चिसो चिसो पानीले नुहाउनु पर्छ. तातो तातो पानी खानु पर्छ.